Sanduuqa khafiifka sameeya Soosaarayaasha | Shiinaha Slim sanduuqa iftiinka Warshad & Shirkado
Hordhac Dukaan soo laalaada oo sudhan laydh laydhadh hogaaminaya oo leh natiijo xayeysiin fiican Isticmaal aluminium tayo sare leh, cufnaan sare, caabbinta qiiqa oo xoog badan, adkaysi badan oo u adkeysi badan Sanado khibrad hodan ah ayaa uruursaday xirfado badan oo xirfadeed iyo dabeecad mas'uuliyad badan. Si loogu fududeeyo macaamiisha inay u adeegsadaan xaalado kala duwan, waxaa jira laba nooc oo laga kala xusho. Macluumaadka alaabada Nooca: Zhengcheng Magaca badeecada: Led xayeysiiso sanduuqa iftiinka sheyga Meelaha: Daawaha Aluminium ...
Hordhac Led menu light santuuqa leh waxqabadka xayeysiinta ee kala duwan Tani waa nooc la cusbooneysiiyay oo ka mid ah sanduuqa nalka oo si isku mid ah u soo baxa, sii jira oo ka tamar badan. Waa qalab lagama maarmaan u ah makhaayadaha heerka sare. Sanduuq iftiin waara ayaa caawiye fiican u ah ganacsigaaga. Summad: Zhengcheng Magaca badeecada: Led menu light sanduuqa nalka Meelaha: Aluminium aluminium aluminium Alwaaxa gadaal: Kt board Frame color: xirxirida Black: 20 nooc oo sanduuqa Dammaanad: 2 sano Voltage: Ballaca xadka 220V: ...
Hordhac Sanduuqan khafiifka ahi waa kan ugu kharashka badan, waana xulashada ugu fiican ee dukaamo badan. Adoo adeegsanaya aluminium tayo sare leh, cufnaan sare, adkeysi qayilo xoog leh, xirashada iska caabin, adkeysi, laba midab ayaa la dooran karaa, habka daabacaadda shaashadda iyo jirka aadka u khafiifka ah. Waxaa jira laba nooc oo sanduuq iftiin ah: sanduuqa nalka kooneha wareega iyo sanduuqa iftiinka xagal midig. Summad: Zhengcheng Magaca badeecada: Sanduuqa iftiinka xayeysiinta Ultra-khafiifka ah Waxyaabaha Qaabdhismeedka: Aluminium Aluminium ah Alwaaxda gadaasha Qalabka: Kt b ...
Hordhac Shaashadda sawirka meeriska sawirka dhejiska leh oo leh qaab aad u khafiif ah Qaabka aadka u cidhiidhsan iyo saamaynta guddi fidsan ayaa si fiican u muujin kara waxa ku jira shaashadda. Shayga waa mid fudud oo deeqsi ah. Waxay adeegsaneysaa naqshadeynta iskuxirka magnetka ee saxanka saldhigga KT iyo guddiga PS-ga, oo sifiican iskusoo koobi kara shaashadda, ka dhigi kara shaashadda mid siman oo si sahlan loo rakibo Waxaa jira muraayadaha dhajiska xagal-xagalka ah iyo wareegyada geeska wareega. Keebaad doorataa waxay kuxirantahay qaabka qurxintaada. Faahfaahinta alaabta B ...
Hordhac Muuqaalka muuqaalka sanduuqa nalka ee miiska dalabka makhaayadaha Xulashada ugu fiican makhaayadaha silsiladaha, aluminium dhan, alwaax aluminium ah, muraayad muraayad tayo sare leh leh, gudbinta iftiin xoog leh, soo bandhig wanaagsan Waxaan ku siineynaa labo sanduuq oo iftiin ah oo aad dooran karto. Macluumaadka badeecada Magaca: Zhengcheng Magaca badeecada: Muuqaalka muuqaalka sanduuqa iftiinka sheyga Meegaarka: Aluminium Aluminium aluminium Alwaaxa gadaal: Kt board Frame midabka: xirxirida Madoow: Toban nooc oo ku jira sanduuqa Dammaanad: 2 sano Danab: 220V Wareeg Weji ah ...
Saxeex Farmashiyaha, Calaamadaha Iftiiminaya, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Xayeysiinta, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah,